श्रीलंकाका बिज्ञ रङ्गशालानिर्माणमा रङ्गशाला बनाउन धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले ल्यायो श्रीलंकाका मैदानबिशेषज्ञ – Bageshwori News
श्रीलंकाका बिज्ञ रङ्गशालानिर्माणमा रङ्गशाला बनाउन धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले ल्यायो श्रीलंकाका मैदानबिशेषज्ञ
२७ पुष २०७६, आईतवार १३:३५
in खेलकुद, प्रदेश नं ५, समाचार
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनको संयोजनमाजनस्तरबाट निर्माण भईरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालानिर्माण अभियानमाआई.सि.सि ग्राउण्ड स्पेशलिष्ट बन्दुलावार्नपुरा जोडिएका छन् । पुस २७गते फाउण्डेशनको तर्फबाट अध्यक्षसिताराम कट्टेल र वार्नपुर बिच रङ्गशालाको ग्राउण्डको कामगर्नेगरी सम्झौताभएको हो ।
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले नेपालमा मैदानकालागीबिशेषज्ञ बोलाएको यो पहिलो पटक नै हो । वार्नपुरा नेपालमाकामगर्न पाउनु र देशले मानेको ब्यक्तिसंग जोडिन पाएकोमाखुसीभएको बताउँछन् । उनकाअनुसार ४ महिनामाप्याराफिट बिनाअन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न मिल्ने ग्राउण्ड रेडी गर्ने र निर्माण अवधी पछि पनि ग्राउण्ड कन्सल्टेन्टका रुपमाजोडिनेछन् ।
वार्नपुरा श्रीलंकाटेस्ट क्रिकेट टिमको पहिलो कप्तान समेत हुन् ।
उनि झण्डै ८ बर्ष श्रीलंकाक्रिकेट बोर्डको क्रिकेट अपरेशन डाईरेक्टर समेत रहिसकेका छन् । वार्नपुरा श्रीलंकाकालागीपहिलो ओ.डि.आई. खेल्ने खेलाडी समेत हुन्, जसले आफ्नो करियरमापहिलोपटक श्रीलंकालाई जितदिलाएकाथिए ।
उनले आफ्नो करियरमा १९७९ को विश्वकपमाभारत बिरुद्धको खेलमा १८ रन र १ विकेटलिँदै खेल श्रीलंकाको पक्षमाजिताएकाथिए ।
जुनश्रीलंकाकालागीपहिलो जितथियो र उनको करियरमा यो खेलले इट्टा थप्ने काममात्र गरेन् यो एक एसोसिएट सदस्य राष्ट्र द्धारा श्रृलंकाकालागी एक मात्रजितथियो,जसमाउनको नामदर्ज छ । उनिश्रीलंकाको राष्ट्रिय टिममा प्रशिक्षक समेत रहेर काम गरेकाथिए र सन २००८ सम्मएसियनक्रिकेट काउन्सिल (ए.सि.सि.) को डेभलपमेन्ट म्यानेजर रहेर काम गरेकाथिए । २०१६ मा ‘युथवीथ ट्यालेन्ट’ नामक रियालिटी शोमा निर्णयकका रुपमा समेत उनले कामगरिसकेका छन् । हालउनिआईसिसि अन्तर्गत को एसियाको ग्राउण्ड हेर्ने स्पेशलिष्ट रहेर कामगरिरहेका छन् ।
जनस्तरबाट सहयोग संकलन गरी निर्माण गरिने यो रङ्गशालामाबिदेशबाट ल्याईएको पहिलो स्पेशलिष्ट उनिहुन् । वार्नपुरालाई रङ्गशालानिर्माण अवधिभरकालागी सम्झौतागरिएको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनकाअध्यक्षसिताराम कट्टेलले जानकारी दिएका छन् ।
‘रङ्गशालानिर्माण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मात्रै होईन् यो एउटा नेपालको गौरव पनिभएकाले बिज्ञ मानिस राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो टिमको सल्लाहअनुसार उहाँलाई बोलाएकाहौं’ वार्नरको बिज्ञता अनुसार अभियानमाजोडिन बोलाईएको बताउँदै धुर्मुसले भने ‘अझै पनिबिशेषज्ञहरु आवश्यक परेको खण्डमा नेपालमै भएकावाबिज्ञहरु बाहिरबाट ल्याएर भएपनि सबैले तारिफ गर्ने र सबै देशले खेल्न चाहने रङ्गशाला बनाउँछौं ।’
‘साङ्लो’ प्रचार को लागि विराज भट्ट नेपालगञ्ज मा ,भन्छन कडा मेहनत गरेको छु
गायक सुशान कुँईकेल र जितु लोप्चनको दोहोरी ब्याटल "फुच्ची"सार्वजनिक